याद गर्नुस,सामाजिक सञ्जालमा जीवनसाथीसँगको तस्वीर शेयर असुरक्षित ! « Nepal Bahas
तस्वीर शेयर गर्ने मानिस सम्बन्धमा असुरक्षित !
प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०७६, शुक्रबार १५:०१
एजेन्सी। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो जीवनसाथीसँगको तस्वीर सबैको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ गरेको छ । किनकी यस किसिमको तस्वीरले कुनै पललाई याद राख्नका लागि सहयोग गर्छ ।
यदि सामाजिक सञ्जालको तस्वीर यादको लागि मात्र सीमित रह्यो भने त्यो कुनै ठूलो कुरा होइन तर यो भन्दा पनि निजी जीवनका सबै तस्वीर शेयर गर्ने मानिसहरुको लागि भने यो एक समस्या बन्न सक्छ ।
नर्थवेस्ट विश्वविद्यालयद्वारा गरिएको एक नयाँ अनुसन्धानमा जीवनसाथीसँगको तस्वीर शेयर गर्ने आदतले मानिसलाई समस्या सृजना गर्न सक्छ । शोधकर्ताहरुले गरेको अनुसन्धानमा सामाजिक सञ्जालमा यसरी धेरै तस्वीर शेयर गर्ने मानिस आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर असुरक्षित महशुस गर्ने गरेको पाइएको हो ।
सम्बन्धमा जसले कमीको अभाव महशुस गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु सामाजिक सञ्जालमा बनावटी तरिकाबाट पोस्ट गरेर समाजमा छवि सुधार्ने प्रयास गर्ने गरेको पाइएको छ ।
यस किसिमका जोडीलाई समाजमा यसरी आफूलाई प्रमाणित गर्दा सम्बन्धमा सुधार हुन्छ कि भन्ने लाग्ने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । साथै अर्को एक अनुसन्धानले सामाजिक सञ्जालले मानिसलाई मानसिक तनाव पनि बढाउने देखाएको छ ।
नर्थवेस्टर्न विविको शोधअनुसार यस किसिमका जोडी दैनिक एउटा वा दुई पोस्ट वा त्यो भन्दा बढी पोस्ट आफ्नो सम्बन्ध देखाउन पोस्ट गर्ने गर्छन् । यस्ता मान्छेहरु वास्तविक जीवनमा आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर असुरक्षित भावनाबाट पीडित हुन्छन् ।
उनीहरुलाई आफ्नो जीवनसाथीलाई गुमाउने सम्बन्ध कमजोर बन्दै जानेलगायतको डर हुने गरेको छ । त्यसैले उनीहरु सामाजिक सञ्जालमा खुसी खोज्नका लागि आउने गर्छन् ।
अनुसन्धानमा एक सय ८ जोडीलाई चयन गरिएको थियो । उनीहरुले फेसबुकमा आफ्नो स्ट्याटस ‘इन ए रिलेसनशिप’ उल्लेख गरेका थिए । दुई सातामा गरिएको अनुसन्धानमा शोधकबर्ताले उनीहरुको फेसबुकको प्रोफइलको गहिराइको अध्ययन गरेका थिए । यस किसिमका मानिसहरु कुन दिन, कुन समय के के पोस्ट गर्छन् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिइएको थियो ।